Eric Abidal Oo Si Qiiro Leh Banaanka U Soo Dhigay Qofkii Naftiisa Ku Badbaadiyay Qayb Ka Mid Ah Beerkiisa Si Uu Saxaafadii Beenta Ka Qortay Cadayn Buuxda Ugu Keeno. - GoolTV.Net
Eric Abidal Oo Si Qiiro Leh Banaanka U Soo Dhigay Qofkii Naftiisa Ku Badbaadiyay Qayb Ka Mid Ah Beerkiisa Si Uu Saxaafadii Beenta Ka Qortay Cadayn Buuxda Ugu Keeno.
By batalaale / 06/07/2018 06/07/2018
Maalmihii la soo dhaafay waxay saxaafadu qortay war aad u xaasaasi ah oo sheegayay in madax waynihii hore ee kooxda Barcelona ee Sandro Rosell uu si sharci daro ah beer ugu soo iibiyay xidigii waqtigaas kooxdiisa ku dhex xanuunsanayay ee Eric Abidal kaas oo halis ugu jiray in uu naftiisa ku waayo xaalad caafimaad oo dhinaca beerka kala soo daristay.
Wararkan ayaa sabab u noqday in kooxda Barcelona ay war saxaafadeed ku beenisay wararkii sheegayay in Eric Abidal lagu badbaadiyay beer si sharci daro ay loo soo iibiyay laakiin halyaygii hore ee xulka qaranka France iyo kooxda Barcelona isla markaana hadda ah agaasimaha ciyaaraha ee Eric Abidal ayaa si qiiro leh uga jawaabay.
Eric Abidal oo soo maray xaalad nolol iyo geeri u dhexaysay isla amrkaana sanadkii 2012 kii waqti dheer cisbitaal ugu jiray xanuun dhinaca beerka ah ayaa ugu danbayn bartiisa Instagram soo dhigay shaqsigii naf hurida sameeyay ee beerkiisa qayb ka mid ah ugu deeqay si noloshiisa uu u badbaadiyo.
Eric Abidal ayaa bartiisa Instagram soo dhigay sawirka uu sariirta cisbtaalka saarnaa isla markaana uu la fadhiyay wiilka ay ilmaadeerka yihiin ee Gerard kaas oo uu shaaciyay in uu ahaa shaqsigii beerkiisa qayb u jiray si nolooshiisa loo badbaadiyo.
Waxa uu Eric Abidal saxaafada beenta ka qortay uu sawirkan meel ku saaray waxyaabaha ayna xaqiiqdooda hayn ee ay iska qoreen wuxuuna u sheegay in la ixtiraamo sharafta wiilka ay ilmaadeerka yihiin ee Gerard kaas oo cisbtaalka isaga oo kula jira uu sawirkiisii soo saaray.
Eric Abidal ayaa sawirka sare ee uu cisbtaalka kula jiro wiilka ay ilmaadeerka yihiin ee Gerard waxa uu soo raaciyay qoraalkan: ” Waxaan doonayaa in sawirkan aan ixtiraamkayga u muujiyo oo aan inaadeerkay Gerard sharaftiisa difaaco . Waxaan doonayaa in aan si cadaan ah u dhaleeceeyo maskax fikirka qaar ka mid ah saxaafada kuwaas oo soo jeedinaya wax shaki ah oo in noloshaysa si sharci daro ah loo badbaadiyay”.
Eric Abidal ayaa qoraalkiisa dareenka badan xambaarsan sii raaciyay: “Hadda joojiya. Waxaan idinka dalbanayaa in aad naftayda iyo qofkasta oo ay shaqsi ahaan heerka noloshaydani saamaynta ugu yeelatay iyo qof kasta oo xaalad la mid ah ku jira”.
Si kastaba ha ahaatee, Eric Abidal oo ixtiraam wayn u haya wiilka ay ilmaadeerka yihiin ee Gerard kaas oo naftiisa ku badbaadiyay qayb ka mid ah beerkiisa si loogu beero ayaa cadho wayn ka muujiyay in qaar saxaafada ka mid ahi ay qoreen in beer sharci daro ah loo soo iibiyay taas oo uu hadda cadayn ku beeniyay.